Imikhiqizo factory, abahlinzeki - China Imikhiqizo Abakhiqizi
CZS uchungechunge flip flow screen
Ipuleti lesikrini lenzelwe ngezinto ezikhethekile futhi linempilo ende yokusebenza; ijubane lokudlidliza kwepuleti yesihlungo izikhathi ezingama-800 / iminithi, futhi ubukhulu bokudlidliza kwento bufinyelela ku-50g; ukulungiswa kwepuleti yesihlungo akudingi amabhawodi, ngakho-ke kulula ukuqaqa bese kufakwa okunye.
Isikrini sokudlidliza okwenziwe ngobhanana
Isikrini sokudlidliza sohlobo lwe-Czxd luhlobo lwesikrini sokujiya esindayo esisebenza ngokulingana, esisetshenziswa kakhulu ekucutshungulweni kokuhlolwa kwemishini enkulu yevolumu yokusebenza nokugqoka. Ngesisekelo sokugaya nokumunca ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle, inkampani yethu yaklama futhi yakhiqiza i-czxd banana type vibrating screen.
Uchungechunge lwe-GPS lwamaza wokudlidliza wemvamisa ephezulu
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokubuyiselwa kwesilayidi kanye nokususwa kwempahla okuhle nokuhlukaniswa, nokufeza inhloso yamandla wokucubungula amakhulu, umphumela omuhle wokususa amandla nokuzivumelanisa nezimo okuqinile, imvamisa ephezulu namandla amakhulu wokudlidliza ayamukelwa.
Isikrini sesigubhu se-GT
Isikrini sesigubhu se-GT yimishini ekhethekile yokuhlola eyenziwe yifektri yethu yokusansimbi, imboni yamakhemikhali, izinto zokwakha, ezezimayini nezinye izimboni. Iyayinqoba inkinga yokuvinjelwa kwesikrini lapho kuhlolisiswa izinto ezimanzi ngesikrini esiyisiyingi esidlidlizayo nesikrini esiqondile, kuthuthukisa ukuphuma nokuthembeka kohlelo lokuhlola, futhi kunconywa kakhulu iningi labasebenzisi.
Isikrini somanyolo wochungechunge lwe-HFS
Isikrini somanyolo wamakhemikhali we-HFS uhlobo olusha lwesikrini esidlidlizayo. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukufaka umanyolo wezinhlanganisela ezahlukahlukene nezinye izinto zamakhemikhali ngobuningi. Uhlobo lwe-HFS umshini wokuhlola umanyolo wamakhemikhali wethule isakhiwo saseMelika "iterakot" nobuchwepheshe obusha be-ring groove rivet. Umsindo ophansi wokudlidliza, ukusebenza kahle kokuhlola okuphezulu nokugcinwa okulula
SZR uchungechunge ore esishisayo isixwayisi screen
SZR uchungechunge ore esishisayo isixwayisi screen is ikakhulukazi isetshenziswa ngezigaba naphakathi nosayizi omncane sinter ore nge lokushisa 600-800oc embonini metallurgical, futhi ukuqedela ukusatshalaliswa iyunifomu imishini Ukupholisa.
Isikrini sokudlikiza phezulu naphansi
Isikrini sokudlidliza esingenhla nesikrini sokudlidliza esiphansi yizidingo zamakhasimende enkampani yethu. Isikrini esidlidlizayo sakhiwe futhi senziwa ngokusebenzisa izici zesikhala.
Isikrini sokudlidliza se-Boom
Isikrini sokudlidliza ingalo yegobolondo le-Xbzs uhlobo olusha lwemishini yokuhlola. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuhlolwa ngaphansi komkhombe wesithando somlilo futhi ilungele ukwahlukaniswa kwezinto ezinkulu, izinto eziphakathi nendawo nezincane eziyimbudumbudu.
Isikrini sokuqina esilinganayo se-ZDS elliptical
Isikrini sobukhulu obulinganayo se-Elliptical sisetshenziselwa ukwahlukaniswa nge-ore kwe-sinter, i-sinter pellet nemboni yezimayini embonini ye-metallurgical, kanye nokuhlelwa nokusebenza kokuhlola embonini yamalahle. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zemishini ye-sieving yezincazelo ezifanayo, amandla wokucubungula makhulu futhi ukusebenza kahle kokuhlola kuphakeme.
Ya (k) uchungechunge lwesikrini esikhulu esiyindilinga esiyindilinga
I-Ya (k) uchungechunge lwesikrini esiyindilinga esikhulu esiyindilinga semishini enkulu yokuhlunga eyenzelwe imboni yezimayini. Kukufanele ukubekwa kwezinto ezinkulu. Inezici zomthamo omkhulu wokucubungula, ukusebenza kahle kokuhlola okuphezulu, ukuqina okuqinile nokunakekelwa okulula.
ZK uchungechunge komugqa isixwayisi screen
Isikrini sokudlidliza komugqa sisetshenziselwa ukuhlukanisa ezimayini zamalahle, izimayini, izinto zokwakha, imboni kagesi namakhemikhali, isikrini sochungechunge sisebenzisa i-riveting ehamba phambili kakhulu ene-rivet yokukhiya, ngesakhiwo esilula, esinamandla futhi esiqinile, umsindo ophansi, ukufakwa okulula nokugcinwa, njll.
Isikrini sokudlidliza se-ZSG
Isikrini sokudlidliza komugqa we-ZSG uchungechunge imishini entsha futhi esebenza kahle yokuhlola, enezici zokusebenza kahle okuphezulu, ukugqoka okuphansi, umsindo ophansi, impilo ende yokusebenza, ukuvimbela ukungcoliswa komoya, ukusebenziseka kalula kwezomnotho, ukonga amandla nokubukeka okuhle. Isetshenziswa kabanzi ekusebenzeni kokuhlolisiswa kwezinhlayiya ezinkulu, eziphakathi nezincane ezimayini, insimbi, amalahle, imboni yamakhemikhali, amandla ashisayo, izinto zokwakha nezinye izimboni.